Rehabilitation | Department Of Social Welfare
ဂျပန်နိုင်ငံ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသည် ဂျပန်နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွှက်မှု အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ လူမှုဝန်ထမ်း လုပ်ငန်းရပ်များ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု စီမံကိန်းအောက်ရှိ နားမကြား သူများ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်းအတွင်း ၀င်ဆန့်မှုမြှင့်တင်ရေး စီမံချက်ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေပါသည်။ အဆိုပါ စီမံချက်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအဖြစ် လူမှုဝန်ထမ် ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်သည် ဂျပန် နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့၏ စီစဉ်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၂၅.၆.၂၀၁၂) မှ (၂၈.၆.၂၀၁၂) ရက်နေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့သို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။
Read more about ဂျပန်နိုင်ငံ လေ့လာရေး ခရီးစဉ်
Read more about နားမကြားသူများ လူ့အသိုင်းအ၀န်းအတွင်း ၀င်ဆန့်မှုမြှင့်တင်ရေးစီမံချက်(ဒုတိယဆင့်) အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း
မသန်စွမ်းသူများ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း အတွင်း အပြည့်အ၀ ပါဝင်ခွင့် ရရှိခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များတွင် အထောက်အကူ ပြုသူများ ဖြစ်လာစေရန်။
ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -
Read more about လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ မသန်စွမ်းသူများပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း
Rehabilitation Services for Ex-Drug Addicts
Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC) has been implementing the specific plans of drug demand reduction, supply reduction and law enforcement with its work - affiliated sectors as national duty. The Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement is responsible for rehabilitation sector to carry out social rehabilitation services for ex-drug addicts.
(a) To get social reintegration and to be free from drug-abuse cycle
Read more about Rehabilitation Services for Ex-Drug Addicts